China Sheep without a Shepherd Copyright sy fampiasam-bola | Galaxy Galaxy
Ondry tsy misy mpiandry
Karazan-tsarimihetsika: Sarimihetsika sinema
Toetra fampiasam-bola: farany
Toro fanolorana: Kintana 5
Lohahevitra: Fampisehoana Drama, Heloka Bevava
Li Weijie (Xiao Yang) sy ny vadiny, A Yu (Tan Zhuo), dia niady nandritra ny taona maro ary manan-janaka roa vavy. Ny alina be oram-be, lozam-pifamoivoizana iray, dia nanimba ny fiadanan'ny fianakaviana. Li Weijie, amin'ny maha-ray azy, hamonjy ny ankohonany dia nanapa-kevitra mafy hanafina ny marina ...
Sam Quah / biraon'ny boaty feno 1,3 miliara.
Yang Xiao / Endgame (2021), Detective Chinatown (2015-2019） ， total boxe 16,8 miliara
Zhuo Tan, biraon'ny boaty feno 6,81 miliara.
Joan Chen / biraon'ny boaty feno 2,73 miliara.
Fanadihadiana amin'ny tsena
Manasongadina ny sarimihetsika
Raha ny tsikombakomba dia mampiasa ny teknikan'ny fiverenana mihetsika ilay sarimihetsika, izay mahatonga ilay sarimihetsika ho somary mikorontana kokoa, feno fahalianana ary miolakolaka ary ny teknikan'ny montage dia manerana ny sarimihetsika
Ny sarimihetsika, nalaina avy amin'ny sarimihetsika Indiana Drishyam, dia mitantara ny tantaran'ny raim-pianakaviana iray izay nampiasa teknika fanoherana ny fikarohana mba hiadiana amin'ny polisy mba hiarovana ny zanany vavy. Ny horonantsary voalohany dia nankasitrahana sy nahomby rehefa navotsotra tany India ary noraisina tsara tany Sina, izay nahazoany naoty 8.5 tao Douban.
Sambany i Xiao Yang no nahita ny toerany marina. Ny endriny tsy manantsiny sy mampalahelo dia manafina ny fisainana mahonon-tena sy tsy manam-paharoa olon-dehibe sy ray. Ity koa dia iray amin'ireo teboka lehibe indrindra amin'ny sarimihetsika.
Amin'ity famonoana olona nateraky ny herisetra nataon'ny zatovo ity dia mazava ny antony manosika an'ireo mpilalao telo mahery: ny fitiavana ny ray aman-dreny. Mpilalao sarimihetsika telo malaza, Xiao Yang, Tan Zhuo ary Chen Chong, no nanome fampisehoana tsara ihany koa teo ambany fanohanan'ity antony manosika ity.
Ao anatin'ilay sarimihetsika dia misy ny delinquency zaza tsy ampy taona, fanararaotam-pahefana, ny elanelana misy eo amin'ny manankarena sy ny mahantra ary ny olana hafa. Nefa ao ambadik'ireo rehetra ireo, mifamatotra ny marina sy ny ratsy, "famonoana olona" te hanontany: ahoana no hamaritana ny sisiny ny marina sy ny ratsy amin'ny farany?
Fomba fizarana bonus: dividends an'ny sinema
Fotoana famoahana: 2019-12-13
Vola famokarana ￥ 250,000,000.00
Tahan'ny famindrana ￥ 250,000,000.00
Mizara sisa ￥ 0.00
Box office ￥ 1,330,000,000.00
Fampiasam-bola Mini ￥ 200,000.00
Heart Galaxy Culture, ny mpitarika eo amin'ny sehatry ny famandrihana ny zon'ny sarimihetsika! Nandritra ny 5 taona nanaovana fikarohana lalina momba ny indostrian'ny fisoratana anarana momba ny zon'ny sarimihetsika sy ny sarimihetsika, ny orinasa dia mandray ny famandrihana tetikasa horonantsary sy fahitalavitra ho fotoana iray hanomezana sehatra fisoratana anarana momba ny zon'ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny angon-drakitra momba ny boaty marina. tranokala ho an'ny consultation.
Teo aloha: Ry oloko, tanindrazako
Manaraka: Ny kapiteny
Sarimihetsika mpamatsy vola tsara indrindra
Sarimihetsika Momba ny Tsenambarotra Mizara
Mizarà tsena miorina amin'ny sarimihetsika
Lisitr'ireo sarimihetsika amin'ny tsena
Movie Stock Stock
Ry oloko, tanindrazako
Maty mba ho tafavoaka velona
Ilay Mpampianatra Yinyang